कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप २ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ४२ पुग्यो — Sanchar Kendra
कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप २ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ४२ पुग्यो
काठमाडौँ । कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप २ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालमा बुधबार थप २ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ४२ पुगेको छ ।
लकडाउन अन्त्य भएसँगै अब कोरोना परीक्षणको रणनीति के?
१ सय २० दिन जारी लकडाउन मंगलबार मध्यरातबाट अन्त्य भएसँगै संक्रमणको जोखिम थप बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। संक्रमणको जोखिम कायम रहेकाले सरकारले परीक्षणलाई पनि चुस्त बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। परीक्षण नगरी संक्रमणको अवस्था थाहा नहुने भन्दै परीक्षणलाई कडाइ नगरे संक्रमण फेरि भित्रभित्रै फैलिएर नियन्त्रण बाहिर जाने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि परीक्षणलाई चुस्त बनाइने दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले रणनीति अनुसार परीक्षणलाई निरन्तरता दिइने बताए। उनले जोखिमको अवस्था हेरेर प्राथमिकताका आधारमा परीक्षण अघि बढाइने जनाए।
मन्त्रालयले विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको मुख्य केन्द्रमा राखेको छ। ‘विदेशबाट आएका सबैको परीक्षण गर्छौं। एकजनालाई पनि छुटाउँदैनौं’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘स्थल मार्गबाट आउनेलाई सीमामै रोकेर स्वाब संकलन गरेपछि मात्र क्वारेन्टिनमा पठाउँछौं। त्यस्तै हवाइ मार्गबाट आउनेलाई पाँच दिन क्वारेन्टिनमा राखेर छेठौं दिनमा परीक्षण गर्छौं।’
उनले त्यसरी राखिएकामध्ये कसैलाई संक्रमण देखिए अवस्था हेरेर होम क्वारेन्टिनमा राख्ने वा आइसोलेसनमा राख्ने कुरो टुंगो गर्ने बताए। अहिले तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालीहरूलाई सरकारले उपत्यकाको विभिन्न होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टिन सेन्टरमा राख्दै आएको छ।
तीमध्ये केहीलाई संक्रमण पनि देखिएको थियो। अहिले विदेशबाट आएकामध्ये धेरै कतार, दुबई, साउदी र मलेसियाका छन्। यस्तै मन्त्रालयले परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको व्यक्तिको सुरुवाती सम्पर्कमा आएका सबैको परीक्षण गर्ने जनाएको छ।
डा. गौतम भन्छन्, ‘भैंसिपाटीमा एकजना बालिकामा संक्रमण देखिएपछि हामीले वरिपरि सबैको परीक्षण गर्यौं। त्यसैले संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका सबैको परीक्षण गर्छौं।’
उनले अहिले दैनिक परीक्षण क्षमता १० हजार बढी रहेको भन्दै परीक्षण गर्नु कुनै समस्या नरहेको बताए। ‘दैनिक १० हजारको बढीको परीक्षण गर्नसक्छौं। त्यसका लागि केही आरएनए एक्ट्याक्सन मेसिन पनि आएको छ। प्रयोगशालाको संख्या पनि बढेर २७ वटा पुगेको छ। त्यसैले परीक्षणमा समस्या छैन,’ उनले भने।
यस्तै कुनै ठाउँमा धेरै संक्रमण देखियो भने त्यस्ता ठाउँका सबै व्यक्तिको तुरुन्त परीक्षण गर्ने भनिएको छ। केही समयअघि केही ठाउँहरूमा एकैपटक धेरैमा संक्रमण देखिएको थियो। ती ठाउँ बाँकेको नरैनापुर, झापाको कचनकवल र दैलेखको नारायण नगरपालिका हुन्।
यी ठाउँहरूमा सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूमा संक्रमण देखिएको थियो। अहिले भने त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। निर्देशिकाभित्र परेका व्यक्ति भने परीक्षणको दायराभित्र स्वतः आउने भन्दै डा. गौतमले भने, ‘ज्वरो, खोकी आएका र अन्य लक्षण भएका सबैको परीक्षण गर्छौं।’
तर लक्षणविहीन व्यक्तिहरूको परीक्षण कसरी गर्ने भने नीति मन्त्रालयले तय गरेको छैन। विज्ञहरूले भने अधिकांश संक्रमितहरूमा लक्षण नदेखिने भन्दै यसमा सरकारले परीक्षणको ठोस नीति तय गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र बिसी भन्छन्, ‘अधिकांश संक्रमितलाई लक्षण देखिँदैन अनि लक्षण नदेखिएपछि मानिसहरू कसरी परीक्षण गर्न जान्छन् ? परीक्षण नभएपछि उनीहरू आफ्ना परिवारमा रहेका बुढापाका र दीर्घ रोगीको सम्पर्कमा पुगे भने सबैभन्दा जोखिम त्यहाँ रहन्छ।’
लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्ने नीति के छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता गौतमले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। ‘यो रोग हावाबाट सर्ने हैन। बाहिरबाटै आउने हो। त्यसैले विदेशबाट आउने व्यक्ति सबैको परीक्षण गरेपछि संक्रमण अन्त कसरी जान्छ,’ उनले प्रश्न तेर्साए।
यद्यपी धेरै भीडभाड हुने ठाउँहरूका व्यक्तिहरुको भने परीक्षण गरिने उनले बताए। सोही अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा थप २० हजार जनाको परीक्षण गरिने उनले जनाए।
‘हामीले उपत्यकामा ५ हजार बढीको परीक्षण गर्यौं। थप २० हजार जनाको परीक्षण गर्दैछौं’ उनले भने, ‘पाँच हजार बढीको परीक्षण गर्दा जम्मा तीन जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसमा पनि दुई जना विदेशबाट आएका र एकजना ब्युटिपार्लरमा काम गर्ने व्यक्ति हुन्। अब संक्रमण नभएको ठाउँमाहरूमा परीक्षण गर्दै हिँड्ने कुरा त भएन नि।’
उनले काठमाडौंमा थप २० हजार जनाको परीक्षण गर्नेमा बैंक काउन्टर, अस्पतालको आकस्मिक कक्ष लगायत धेरै भीडभाड हुने ठाउँका व्यक्ति रहेको बताए। उनले संक्रमणलाई रोक्न परीक्षण पहिलो कडी नभएको भन्दै सबैभन्दा ठूलो भनेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नै पालना गर्नु रहेको जनाए।
‘परीक्षण ठूलो कुरा हैन। पहिलो कुरा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्यो। साबुन पानीले हात धुनुपर्यो। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्‍याे। भिडभाडमा जानुभएन। स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्यो,’ उनले भने। अब मन्त्रालयको चिन्ता भनेकै सर्वसाधारणले नियम पालना नगर्दा संक्रमण बढ्ने हो कि भन्ने रहेको उनले बताए।
प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘बाहिरबाट आउनेको चिन्ता छैन। उहाँहरूको त हामी परीक्षण गरेर राख्नुपर्ने ठाउँमा व्यवस्थित तरिकाले राख्छौं। तर यहाँ रहेका व्यक्तिहरूले पो नियम पालना नगर्दा संक्रमण बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ।’